के तपाईलाई थाहा छ ? बच्चा जन्माउन उत्तम महिना कुन हो ? - Samachar Post Dainik
के तपाईलाई थाहा छ ? बच्चा जन्माउन उत्तम महिना कुन हो ?
संसारका अधिकांश प्राणीले जीवनचक्र चलाउन वा वंशको परम्परा धान्न बच्चा जन्माउने गरेका छन् । प्रकृतिले नै उनीहरुको यौ न जीवन र सन्तान उत्पादन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ ।
तर, मानवमात्र यस्तो प्रााणी हो जसले अन्य कुराको जस्तै यौ न जीवनलाई प्रकृतिको नियन्त्रणमा रहन दिएको छैन । पछिल्लो समय मानिसले सन्तान जन्माउने उत्तम समय कुन हो भन्ने बारेमा विभिन्न बहस हुन थालेका छन् ।
ति बहस अनुसार वैज्ञानिकहरुले सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय कुन भनेर अनुसन्धान थालेका छन् ।
१२ वर्ष लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययनमा धेरै दम्पत्तीले सन्तान जन्माउन यी दुई महिना रोजे, सकभर गर्मी महिनामा गर्भवती नबन्न वैज्ञानिकहरुको सुझाव
यही भएर वैज्ञानिकहरुको ध्यान पनि कहिले बच्चा जन्माउँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन, ‘बच्चा ग-र्भाधारणको लागि सबैभन्दा उपर्युक्त समय डिसेम्बर र जनवरी महिना हो ।’
केहि समय पहिला ५ करोड २० लाख गर्भवती महिलामा १२ वर्ष लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययनमा धेरै दम्पत्तीले सन्तान जन्माउन यी दुई महिना रोजेको जनाएको छ । सकभर गर्मी महिनामा गर्भवती नबन्न पनि अनुसन्धनमा संलग्न इन्डियन युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन् । अध्ययन टोलीले जुनमा ग-र्भाधारण नगर्न पनि सबै दम्पत्तीलाई सुझाब जनवरी र डिसेम्बरमा ग-र्भवती हुने महिला ग-र्भाअवस्थाको अन्तिम समयमा उच्च मात्रामा सूर्यको प्रकाश पाउने अध्ययन टोलीका प्रमुख डा पउल विनचेस्टरको भनाई छ ।
आमाले लिएको तापक्रममार्फत प्राप्त हुने भिटामिन डीले शिशुलाई स्वस्थ बनाउने उनीहरुको तर्क छ । जुन महिनामा गर्भाधारण स्वास्थ्यका लागि हा-निकार हुने उनीहरुको दाबी छ ।
गर्मी मौसमा खेतीपातीमा प्रशस्त मात्रामा वि-षाधीको प्रयोग हुने र हावामार्फत त्यसको असर ग-र्भधारण गर्ने महिलामा पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
अध्ययन टोलीले डिसेम्बरमा ग-र्भाधारण गरी सेप्टेम्बरमा बच्चा जन्माउने अभिभावकको संख्या बढी भएको जनाएको छ । ‘र-सायनको मौसमी प्रभाव र आईभीएफ ग-र्भधारणमा भिटामिन डीको प्रभावबारे पछिल्लो समयमा चासो बढेको छ ।’
अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन् । अध्ययन टोलीले जुनमा ग-र्भाधारण नगर्न पनि सबै दम्पत्तीलाई सुझाब दिएको छ ।
प्रकाशित मिति ६ बैशाख २०७८, सोमबार ०२:५४